Soratra Masina - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Ny Soratra Masina
Ny soratra masina dia tenin’ny tsindrimandrin’Andriamanitra, ny fijoroana ho vavolombelona mahatoky ny filazantsara, ary ny famoahana marina sy marina ny fanambaran’Andriamanitra ho an’ny olombelona. Amin'io lafiny io, ny Soratra Masina dia tsy mety diso ary fototra iorenan'ny Fiangonana amin'ny fanontaniana rehetra momba ny fotopampianarana sy ny fiainana. Ahoana no ahafantarantsika hoe iza i Jesosy ary inona no nampianarin’i Jesosy? Ahoana no ahafantarantsika raha tena misy na diso ny filazantsara iray? Inona no fototry ny fahefana amin'ny fampianarana sy ny fiainana? Ny Baiboly no loharanon’ny tsindrimandry sy tsy mety diso izay tokony ho fantatsika sy hataontsika ny sitrapon’Andriamanitra. (2. Timoty 3,15- enina ambin'ny folo; 2. Petrus 1,20-21; Jaona 17,17)
Fijoroana ho vavolombelona momba an 'i Jesosy
Mety ho nahita ny tatitra an-gazety momba ny "Jesosy Seminar" ianao, andiana manampahaizana milaza fa tsy nilaza ny ankamaroan'ny zavatra nolazainy i Jesosy taorian'ny filazan'ny Baiboly. Na mety efa nahare ny manam-pahaizana hafa milaza ianao fa ny Baiboly dia fitambarana fifanoherana sy angano.
Betsaka ny nahita fianarana no mandà ny Baiboly. Ny sasany, mitovy fanabeazana, dia mihevitra azy io ho vanim-potoana azo itokisana ny zavatra nataon'Andriamanitra sy nolazainy. Raha tsy afaka matoky izay lazain'ny Baiboly momba an'i Jesosy isika, dia tsy misy zavatra fantatsika momba azy.
Ny "Seminar Jesosy" dia nanomboka tamin'ny alàlan'ny hevitra mialoha ny zavatra ho nampianarin'i Jesosy. Ny faneken'izy ireo ihany no nifanekena tamin'ity sary ity ary nolaviny ny tsy fanarahana izany. Izany dia namorona an'i Jesosy teo amin'ny sarinao. Ity dia tena manontany tena avy amin'ny fomba fijery siantifika ary na dia ny mpahay siansa liberaly aza dia tsy mitovy amin'ny "Seminar Jesus".
Misy antony tsara ve hinoantsika fa azo itokisana ny fitantaran'ny Baiboly an'i Jesosy? Eny - voasoratra an-taonany vitsivitsy taorian'ny nahafatesan'i Jesosy, raha mbola velona ny nanatri-maso. Ny mpianatra jiosy matetika dia nitadidy ny tenin'ireo mpampianatra; azo inoana fa ireo mpianatr'i Jesosy dia nampita ny fampianaran'ny Tompony tamin'ny fomba marina tsara. Tsy manana porofo izahay fa namorona teny handaminana ireo olana tao amin'ny fiangonana voalohany, toy ny famorana. Midika izany fa azo atokisana tsara ny fampianaran'i Jesosy.
Azontsika atao ihany koa ny mandray ny haavon'ny fahatokisana avo lenta amin'ny fampitana ireo loharano an-tsoratra. Manana sora-tanana izahay tamin'ny taonjato fahefatra ary ampahany kely kokoa tamin'ny taonjato faharoa. (Ny sora-tanana Virgil tranainy indrindra dia nosoratana 350 taona taorian'ny fahafatesan'ny poeta; Plato 1300 taona taty aoriana.) Ny fampitahana ireo sora-tanana dia naneho fa ny Baiboly dia nalaina tahaka tamim-pitandremana ary manana lahatsoratra azo antoka izahay.
Jesosy: fijoroana ho vavolombelon'ny Soratra Masina
Vonona hiady hevitra amin'ny Farisiana i Jesosy momba ny olana maro, saingy toa tsy iray ihany izany: amin'ny fanekena ny voalazan'ny Soratra Masina. Matetika izy ireo dia manana fomba fijery samy hafa momba ny fandikana sy ny lovantsofina, saingy toa nifanaraka tamin'ny pretra jiosy fa ny soratra masina no fototry ny finoana sy ny asa.
Nanantena i Jesosy fa ho tanteraka ny teny rehetra ao amin’ny Soratra Masina (Mat 5,17-18; Marka 14,49). Nanonona andinin-teny izy mba hanohanana ny teniny2,29; 26,24; 26,31; John 10,34); Niteny mafy ny olona izy noho ny tsy famakiana tsara ny soratra masina2,29; Lioka 24,25; John 5,39). Niresaka momba ny olona sy ny fisehoan-javatra ao amin’ny Testamenta Taloha izy nefa tsy nisy na dia kely akory aza fa mety ho tsy nisy izany.
Tao ambadiky ny soratra masina no nisy ny fahefan’ Andriamanitra. Nanohitra ny fakam-panahin’i Satana i Jesosy: “Voasoratra hoe” (Mat 4,4-10). Ny fisian’ny zavatra iray ao amin’ny soratra masina dia nahatonga azy io tsy azo lavina fa fahefana ho an’i Jesosy. Ny tenin’i Davida dia avy amin’ny herin’ny Fanahy Masina (Marka 12,36); Nisy faminaniana nomena “tamin’ny alalan’i” Daniela (Matio 24,15) satria Andriamanitra no tena niaviany.
Ao amin’ny Matio 19,4-5 hoy Jesosy Mpahary miteny ao 1. Mosesy 2,24: “Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin’ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roroa”. Ny tantaran'ny famoronana dia tsy milaza an'io teny io ho an'Andriamanitra. Azon’i Jesosy atao ny milaza an’izany ho an’Andriamanitra satria fotsiny ao amin’ny soratra masina. Soso-kevitra fototra: Ny tena mpanoratra ny soratra masina dia Andriamanitra.
Asehon’ny filazantsara rehetra fa noheverin’i Jesosy ho azo itokisana sy azo itokisana ny soratra masina. Nanohitra an’ireo olona te hitora-bato azy izy hoe: “Tsy azo tsinontsinoavina ny Soratra Masina.” ( Jaona 10:35 ). Noheverin’i Jesosy ho marina tanteraka ireo; niaro ny fahamarinan’ny didy tamin’ny fanekena taloha mihitsy aza izy raha mbola nanan-kery ny fanekena taloha (Matio 8,4; 23,23).
Ny fijoroana ho vavolombelon'ny apôstôly
Tahaka ny mpampianatra azy ireo dia nino ireo apôstôly fa manana fahefana ny soratra masina. Nanonona azy ireo matetika izy ireo, matetika mba hanohanana hevitra iray. Ny tenin’ny Soratra Masina dia raisina ho toy ny tenin’Andriamanitra. Ny Soratra Masina aza dia natao manokana ho Andriamanitra izay niteny tamin’i Abrahama sy Farao (Romana 9,17; Galatianina 3,8). Izay nosoratan’i Davida sy Isaia ary Jeremia dia tena nolazain’Andriamanitra ary azo antoka (Asan’ny Apostoly 1,16; 4,25; 13,35; 28,25; Hebreo 1,6- enina ambin'ny folo; 10,15). Ny lalàn'i Mosesy dia heverina fa maneho ny sain'Andriamanitra (1. Korintiana 9,9). Ny tena mpanoratra ny Soratra Masina dia Andriamanitra (1. Korintiana 6,16; Romana 9,25).
Antsoin’i Paoly hoe “izay nolazain’Andriamanitra” ny Soratra Masina (Romana 3,2). Araka ny voalazan’i Petera, ny mpaminany dia tsy niteny “avy amin’ny sitrapon’ny olona”, “fa noho ny fitarihan’ny Fanahy Masina no nitenenan’ny olona tamin’ny anaran’Andriamanitra”.2. Petrus 1,21). Tsy ny mpaminany mihitsy no nanao izany - Andriamanitra no nanome azy ireo, izy no tena nanoratra ny teny. Matetika izy ireo no manoratra hoe: "Ary nivoaka ny tenin'i Jehovah ..." na: "Izao no lazain'i Jehovah ..."
Nanoratra toy izao ho an’i Timoty i Paoly: “Ny Soratra Masina iray manontolo dia avy amin’ny tsindrimandrin’Andriamanitra, ka mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana ...” (2. Timoty 3,16, Baiboly Elberfeld). Na izany aza, tsy tokony hamaky ao anatin'izany ny hevitsika maoderina momba ny dikan'ny hoe "fofonin'Andriamanitra". Tsy maintsy tsaroantsika fa ny fandikan-tenin’ny Septuagint no tian’i Paoly holazaina, dia ny fandikana grika ny soratra hebreo (izany no andinin-teny fantatr’i Timoty hatramin’ny fahazazany - andininy faha-15). Nampiasa an’io fandikan-teny io ho tenin’Andriamanitra tsy misy dikany i Paoly mba hilazana fa lahatsoratra tonga lafatra izy io.
Na eo aza ny tsy fitovian-kevitra amin'ny fandikan-teny dia omen'Andriamanitra fofonaina izy ary mahasoa "ho fanabeazana amin'ny fahamarinana" ary mety hahatonga ny "lehilahin'Andriamanitra ho tonga lafatra, alefa amin'ny asa tsara rehetra" (andininy 16-17).
Ny tenin 'Andriamanitra tany am-boalohany dia lavorary, ary Andriamanitra dia afaka mahazo antoka fa mampiasa ny teny mety ny olona, ​​mitahiry izany tsara, ary (hamita ny fifandraisana) dia takany tsara izany. Saingy Andriamanitra tsy nanao izany tanteraka sy tsy nisy banga. Ny kopianay dia misy lesoka amin'ny fitsipi-pitenenana sy an-tsoratra, ary ny tena zava-dehibe dia misy lesoka amin'ny fandraisana ilay hafatra. Amin'ny lafiny iray, ny "tabataban'ny fiaviana" dia manakana antsika tsy handre ny teny nidirany tsara. Nefa Andriamanitra dia mampiasa ny Soratra Masina hiresahana amintsika ankehitriny.
Na eo aza ny "tabataba", na eo aza ny fahadisoan'ny olombelona izay mivezivezy eo amintsika sy Andriamanitra, dia manatanteraka ny tanjony ny Soratra Masina: ny milaza amintsika ny momba ny famonjena sy ny fitondran-tena tsara. Mahavita izay tadiaviny amin'ny Soratra Masina Andriamanitra: manome antsika ny Teniny amin'ny mazava fa afaka mahazo famonjena isika ary afaka miaina ny zavatra takiny amintsika.
Nanatanteraka an'izany tanjona izany ny soratra masina, amin'ny endrika nadika koa. Na izany aza, tsy nahomby izahay raha nanantena zavatra bebe kokoa noho izy araka ny nikasan'Andriamanitra. Tsy boky momba ny astronomia sy ny siansa voajanahary io. Ny isa ao amin'ny endri-tsoratra dia tsy voatery mifanaraka amin'ny fenitra ankehitriny. Mila manaraka ny tanjon'ny Soratra Masina isika ary tsy mifikitra amin'ny zavatra kely.
Ohatra: Ao amin’ny Asan’ny Apostoly 21,11 Nilaza i Agabo fa hamatotra an’i Paoly ny Jiosy ka hanolotra azy amin’ny Jentilisa. Mety hisy hihevitra fa i Agabo no nilaza mazava hoe iza no hamatotra an’i Paoly sy izay hataony aminy. Fa ny zava-nitranga dia novonjen'ny Jentilisa i Paoly ary nofatoran'ny Jentilisa (and. 30-33).
Mifanohitra ve izany? Ara-teknika eny. Ilay faminaniana dia marina amin'ny fotony, fa tsy amin'ny antsipiriany. Mazava ho azy, rehefa nanoratra an'io i Lukas dia azoko natao mora ny namina ilay faminaniana mba hifanaraka amin'ny valiny, fa tsy niezaka nanafina ireo tsy fitoviana izy. Tsy nanantena izy fa hanantena ny mpamaky amin'ny antsipiriany ireo. Izany dia tokony hampitandrina antsika amin'ny fanantenantsika ny marina amin'ny antsipirian'ny Soratra Masina.
Mila mifantoka amin’ny hevi-dehibe amin’ny hafatra isika. Toy izany koa fa nanao fahadisoana i Paoly rehefa nanao izany 1. Korintiana 1,14 nanoratra - fahadisoana nohitsin'ny andininy faha-16. Samy ahitana ny fahadisoana sy ny fanitsiana ireo andinin-teny ara-tsindrimandry.
Misy olona mampitaha soratra masina amin'i Jesosy. Iray ny Tenin'Andriamanitra amin'ny fitenin'olombelona; ny iray hafa dia Tenin'Andriamanitra. Lavorary i Jesosy amin'ny heviny hoe tsy nanota izy, nefa tsy midika izany fa tsy nanao fahadisoana mihitsy izy. Tamin'izy mbola kely, na dia olon-dehibe aza dia mety nanao fahadisoana tamin'ny fitsipi-pitenenana sy hadisoana nandrafitra izany, fa tsy fahadisoana izany. Tsy nampijanona an'i Jesosy ny hanatanterahany ny tanjony - ho tonga mpanota tsy misy ota amin'ny fahotantsika. Ny hadisoana, ny fitsipi-pitenenana sy ny antsipiriany kely dia tsy manimba ny dikan'ny Baiboly: mitarika antsika hahazo ny famonjena amin'ny alalan'i Kristy.
Tsy misy afaka manaporofo fa marina avokoa ny votoatin'ny Baiboly manontolo. Azonao atao ny manaporofo fa tanteraka ny faminaniana iray, saingy tsy azonao atao ny manaporofo fa mitovy ny Baiboly manontolo. Izany no fanontaniana hafa finoana. Hitantsika ny porofo ara-tantara nataon'i Jesosy sy ny apostoly fa ny Testamenta Taloha dia Tenin'Andriamanitra. Jesosy ara-Baiboly ihany no hany ananantsika; ny hevitra hafa dia mifototra amin'ny vinavina fa tsy porofo vaovao. Izahay dia manaiky ny fampianaran'i Jesosy fa ny Fanahy Masina no hitarika ny mpianatra amin'ny fahamarinana vaovao. Izahay dia manaiky ny tenin'i Paoly hanoratra amin'ny fahefana avy amin'Andriamanitra. Manaiky isika fa manambara amintsika ny Baiboly hoe iza Andriamanitra ary ahoana no ahafahantsika mifandray aminy.
Izahay dia manaiky ny fijoroana ho vavolombelona momba ny tantaran'ny fiangonana fa nandritra ny taonjato maro dia nahita ny Baiboly ho mahasoa amin'ny finoana sy ny fiainana ny Baiboly. Ity boky ity dia milaza amintsika hoe iza Andriamanitra, nanao izay nataony ho antsika, ary ahoana no tokony handraisantsika ny valiny. Ny hadita dia milaza amintsika koa hoe boky inona avy ny kanônan'ny Baiboly. Miantehitra amin'Andriamanitra izahay mba hitari-dàlana ny fizotran'ny kanônisialy, ka ny sitrapony dia teo amin'ny sitrapony.
Ny zavatra niainantsika ihany koa dia miresaka ny fahamarinan'ny Soratra Masina. Ity boky ity dia tsy mince teny ary mampiseho amintsika ny fahotantsika; Izy io dia manome fahasoavana sy fieritreretana madio. Manome antsika tanjaka ara-pitondran-tena izany tsy avy amin'ny fitsipika sy baiko fa amin'ny fomba tsy ampoizina - amin'ny fahasoavana ary amin'ny fahafatesan'ny Tompontsika mahamenatra.
Ny Baiboly dia manaporofo ny fitiavana, ny fifaliana ary ny fandriampahalemana izay azontsika amin'ny alàlan'ny finoana - fahatsapana fa, toy ny nosoratan'ny Baiboly, mihoatra ny fahafahantsika milaza azy ireo. Ity boky ity dia manome antsika heviny sy tanjona eo amin'ny fiainana amin'ny alàlan'ny milaza amintsika ny famoronana sy ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Ireo lafiny momba ny fahefan'ny Baiboly ity dia tsy azo hamarinina amin'ny fisalasalana fa manampy azy hanamarina ny soratra masina izay milaza amintsika ny zavatra iainana.
Tsy manatsara ny mahery fo ny Baiboly; izany dia manampy antsika hanaiky azy ireo ho azo itokisana. Izy io dia milaza ny fahalemen'ny olombelona an'i Abrahama, Mosesy, David, ny vahoakan'Israely, izay mpianatra. Ny Baiboly dia teny izay manaporofo amin'ny teny manam-pahalalana kokoa, teny tonga nofo ary ny vaovao tsaran'ny fahasoavan'Andriamanitra.
Tsy tsotra ny Baiboly; tsy manamora ny tenany izy. Ny Testamenta Vaovao dia manohy ny fanekena taloha amin'ny lafiny iray ary mivadika amin'ny lafiny iray. Moramora kokoa ny hanatanterahana azy tsy misy na iray hafa, fa mitaky faniriana misy ihany koa. Tahaka izany koa, i Jesosy dia naseho ho olombelona sy Andriamanitra tamin'ny fotoana iray, fitambarana tsy te hifanaraka tsara amin'ny eritreritra hebreo, grika na maoderina. Ny fahasarotam-po io dia tsy noforonina tamin'ny tsy fahalalana ny olana filozofia, fa na dia teo aza izany.
Boky mitaky ny Baiboly, tsy ho nosoratan'ny mponin'ny tanindrazana tsy mahay fianarana izay te hamitaka na hanao halotoana. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia mampisy lanja ny boky izay manambara zava-nitranga mahatalanjona iray. Manampy trotraka ny fijoroana ho vavolombelon'ireo mpianatra io Jesosy io - ary ny lojika tsy ampoizina ny fandresena ny fahafatesana amin'ny alàlan'ny fahafatesan'ny Zanak'Andriamanitra.
Mamerimberina fanontaniana ny Baiboly momba ny fisainantsika momba an'Andriamanitra, momba ny tenantsika, momba ny fiainana, momba ny tsara sy ny ratsy. Mitaky fanajana izany satria manome antsika fahamarinana izay tsy ho vitantsika na aiza na aiza. Ho fanampin'ny fiheverana teolojia rehetra, ny Baiboly dia "manamarina" ny tenany ambonin'izany rehetra izany amin'ny fampiharana azy eo amin'ny fiainantsika.
Ny fijoroana ho vavolombelona momba ny Soratra Masina, ny lovantsofina, ny traikefa ary ny antony manokana dia manohana ny fitenin'ny Baiboly fa fahefana. Fa afaka miresaka manerana ny sisin'ny kolontsaina izy, dia miresaka momba ny toe-javatra tsy nisy tamin'ny fotoana namoronana azy - io koa dia voaporofon'ny fahefany maharitra. Ny porofon'ny Baiboly tsara indrindra ho an'ny mpino anefa, dia ny Fanahy Masina no afaka manova ny saina ary manova ny fiainana avy any ambany ka hatrany ambany.